တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟောကိန်း (1-3-2020 to 7-3-2020)
March 1, 2020 Alinn Pya 0
တနင်္ဂနွေသားသမီး (မွနျမာစာမမှနျပါက အောကျသို့ဆှဲပွီးဖတျပါ) ဒေါသထွက်စရာကိစ္စတွေ စိတ်ပေါက်ကွဲစရာကိစ္စတွေကြုံရတတ်တဲ့ကာလပါ ဒီလိုကာလတွေမှာ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ပြန်ထိန်းနိူင်မှသာ ရန်နည်းပါလိမ့်မည် စက်ပစ္စည်းအဟောင်းတွေ အဝင်မခံသင့်သလို နေအိမ်ရှိ နာရီတွေလည်း ရပ်နေတာမျိူး မဖြစ်ပါစေနဲ့ သင်တန်းတက်ဖို့ကြံစည်ထားပါက အောင်မြင်ပါမည် အချစ်​​ရေးကံ အားနည်​း​နေပါ​သေးသည်​ ကျန်​းမာ​ရေးတွင် ​​သွေးမကြာခဏတိုး​နေတတ်​ပါသည်​ ထီ ၆၅ပါသောထီထိုးပါ တနင်္လာသားသမီး မိမိလုပ်စရာရှိသော ကိစ္စများကို ရဲရဲဝ့ံဝ့ံလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါ ကြိမ်းသေ အောင်မြင်ပါလိမ့်မည် မိမိကို အကူအညီပေးမည့်သူများလည်း ပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မည် ကျန်းမာရေး […]
၅ ရက်အတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် ပြည်နယ် ၃ ခုတွင် မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး လေပြင်းတိုက်နိုင်
မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်က ရွေ့လျားလာတဲ့ လေပွေလှိုင်းတွေရဲ့အရှိန်ကြောင့် မတ်လ ၂ ရက်ကနေ ၆ ရက်အထိ စစ်ကိုင်းတိုင်းအပါအဝင် ပြည်နယ် ၃ ခုမှာ မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်တယ်လို့ မိုး/ဇလဦးစီးဌာနက သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ စစ်ကိုင်း၊ ကချင်၊ ရှမ်းနဲ့ ချင်းပြည်နယ်တွေမှာ နေရာကွက်ကျားမှ နေရာကျဲကျဲ မိုးထစ်ချုန်းရွာ နိုင်တာကြောင့် အဲဒီအချိန်မှာ မိုးရွာတာနဲ့အတူ လေပြင်းတိုက်တာ၊ လေပြင်းနဲ့အတူ ထစ်ချုန်းတာ၊ မိုးကြိုးပစ်တာ၊ လျှပ်စီးလက်တာနဲ့မိုးသီးကြွေတာတွေပါ ဖြစ်နိုင်လို့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ သတိပြု နေထိုင်ဖို့ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ […]
အိမ်ထောင်သက်တမ်း(၆)နှစ်ကျော်မှာ ခင်ပွန်းနဲ့ တရားဝင်ကွာရှင်းလိုက်တဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း(ရုပ်သံ)
အဆိုတော် ရေဗက္ကာဝင်းကတော့ ခင်ပွန်းနဲ့ တရားဝင်ကွာရှင်းလိုက်တာ (၃)လကျော်လောက် ရှိပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ရေဗက္ကာဝင်းက လက်ရှိ အိမ်ထောင်ရေး အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် …. ။ ယခင်က အင်တာဗျူးတွေမှာ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတိအကျ ပြောပြလို့ ရတဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုရောက်မှ ပရိသတ်တွေကို အသိပေးချင်တယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ သူမက အခုချိန်မှာ ခင်ပွန်းနဲ့ တရားဝင် ကွာရှင်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလိုက်ပါပြီ။ […]
စာမေးပွဲဖြေကာနီးမှာ ထီ သိန်းတစ်ထောင် ကံထူးသွားတဲ့ (၁၀)တန်းကျောင်းသူလေး
ပခုက္ကူကိုင်းရွာကဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးမခင်သန္တာထွန်း ၁၃ ကြိမ်ေျမာက် သိန်း1000ကံထူးရှင် ျဖစ္ပါတယ် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကြီးကိုလဲဂုဏ်ထူးများစွာဖြင့်အောင်မြင်ပါစေ။ ရွှေတန့်တစ် သရက္ခန် ဘုရားကဒေါ်မာမာမြင့် မိုးယံရွှေလမင်းနှင့်မြတ်ဆုကုဋေထီဆိုင်ကဆွတ်ခူးပေးလိုက်ပါပြီနော်။ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်။နောက်လဲ ဆုကြီးများစွာကို ဆွတ်ခူးအောင်ရောင်းချနိုင်ပါစေ။ ၁၃ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ ဖွင့်ပွဲ ထီဆုစာရင်းများ သိန်း ၁၅၀၀၀. ဠ ၂၇၇၄၆၅. သိန်း ၁၀၀၀၀. ဠ ၁၀၆၈၉၆. မိုးယံ သိန်း ၅၀၀၀. ယ ၄၃၅၅၈၀. သိန်း ၅၀၀၀. ကဃ ၉၆၄၅၇၂. […]
အမြန်လမ်းမကြီး မိုင်တိုင်၃၂၉/၂-၃၂၉/၃ ကြား HIJET ယာဉ် တိမ်းမှောက် ၆ဦးသေဆုံး
မတ်လ(၁) ရက်နေ့ ညနေ (၀၄၁၀) အချိန် နေပြည်တော်-မန္တလေး လမ်းမိုင်တိုင်၃၂၉/၂-၃၂၉/၃ အကြား တွင် ယာဉ်မောင်း ကိုဇော်ဇော် မောင်းနှင်လာသည့် 3G/—-HIJET အဖြူရောင်ယာဉ်သည် ယာဘက်ရှေ့ဘီးပေါက်ပြီး လမ်းလယ်ကျွန်းပေါ်တွင်တိမ်းမှောက်ရပ်တန့်ခဲ့ရာ ယာဉ်ပေါ်တွင်ယာဉ် မောင်းပါ ကျား ၆ ဦးမ ၇ ဦး စုစုပေါင်း ၁၃ ဦးပါရှိသည့်အနက်ယာဉ်မောင်းပါ ကျား ၃ ဦးမ ၃ ဦး ပေါင်း ၆ဦး(သေဆုံး) ကျား၂ဦး မ […]